Quruxleyda Xoana Gonzalez oo hadda ka hor la seexatay Lional Messi oo fariin culus u dirtay Cr 7!! | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada Quruxleyda Xoana Gonzalez oo hadda ka hor la seexatay Lional Messi oo fariin culus u dirtay Cr 7!!
Quruxleyda Xoana Gonzalez oo hadda ka hor la seexatay Lional Messi oo fariin culus u dirtay Cr 7!!
Bulsha:- Gabadhan caanka ah oo dhanka Model-ka ku can baxday ayaa ceebeysatay dhowr ciyaartooy oo waaweyn kuwaasoo ay sheegtay in ay ku qancin waayeen ciyaarta sariirta ama Galmada.
Mr Xoana Gonzalez oo ah gabar Model ah dhanka kalana jirkeeda ka ganacsata, waxa ay cod dheer ku tiri waxaan doonayaa ciyaaryahan kubadda cagta ciyaara kaasoo aan lamid aheyn Messi.
Ujeedada Lionel Messi ay usoo qaaday gabadhan ayaa ah in ay hadda ka hor ay la wadaagtay galmo ciyaaryahanka Barcelona , laakiin uu ku fashilmay, iyadoo ku kaftantay inuusan ugu wanaagsaneyn Galmada sida uu ugu wanaagsan yahay garoonka.
Gabdhaan reer Argentina ayaa u sheegtay Peruvian TV inay dareensan tahay kaliya in ciyaartooyda aysan aheyn kuwa dumarka qancin kara.
“Markii aad hal ciyaar qabsato garoonka oo dhan waxaad soo jiidaneysaa gabdho qurux badan, laakiin marka runta la yimaaado ma qancin kartit ayay tiri gabadhaan oo dureysay ciyaartooyda caanka ah qaarkood.
Gonzalez ayaa hadda is weydiineysa inuu jiro ciyaaryahan iyada qancin kara, iyadoo tusaale usoo qadatay Messi oo ay ku shegtay mid dareen ahaan dhintay, laakiin waxay farta ku fiiqday Cristiano Ronaldo iyo ciyaartooyda kale ee waaweyn in ay sugaeyso maalin uun.